Muxuu ku saleysan yahay khilaafka ka dhex curtay hogaamiyaha Ahlu sunna-da [G/dhexe] iyo RW Khayre.? | YoobsanNews.com
Khamiis, 18 Luuliyo [Yoobsannews Online] Waxaa soo baxay warar sheegaya in khilaaf soo kala dhexgalay RW Xassan Cali Khayre & Macalin Maxamuud oo madax ka ah Ahlu sunnada G/dhexe.
Khilaafkani, ayaa ah mid salka ku haya qoddobo ka mid ah heshiiskii ay 2da dhinac isla gaareen oo kooxda Ahlu sunna ay u arkeyso in sida wax u socdaan aan wax badan laga talogelin, waxaanna warar ku dhow dhow Macalin Maxamuud ay sheegayaan inuu saluug ka muujiyey habka DF Soomaaliya u dooneyso in ay u maamusho doorashada Galmudug.
Qorshaha dowladda waxaa qeyb ka ah dedejinta doorashada Galmudug iyo sidoo kalena in ciidamo isku dhaf ah lagu xareeyo xeradii 21-aad, waxaana taas barbar socda in ay jiraan ashqaas gaar ah oo ay Dowladdu la dooneyso in ay hogaanka u qabtaan Galmudug-ta cusub, iyada oo afkana laga sheegayo in la qabanayo doorasho xor iyo xalaal ah.
RW Khayre ayaa ku guuleystay in Ahlu sunna iyo Madaxweyne Xaaf oo isdiidan uu midba goonidiis heshiis ula gaaro, inkastoo dadka qaar ay qabaan in xaaladu weli tahay [faanoole fari kama qodna] haddana waxa ay dad badani qirayaan in RW Khayre ku guuleystay muddadii uu u kala gooshayey Cadaado & Dusamareeb tillaabooyin bud-dhig u noqon kara in Galmudug khayrkeed wax la qeybsato.
Previous: Xildhibaan Fiqi “Guddiga Dib u heshiisiinta Galmudug lagu sheegay marka laga reebo dhowr qofood, intooda badan….”
Next: Jaaliyadda Soomaalida Talyaaniga oo ka horyimid magacaabis uu sameeyey safiirka